Anigu ma aan galmo ka badan 10 sano - Rule News
Anigu ma aan galmo ka badan 10 sano
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Anigu ma aan galmo ka badan 10 sano” waxaa qoray Pamela Stephenson Connolly, for The Guardian on Monday 21 December 2015 08.00 UTC
Waxaan ahay qof dumar ah oo 46-sano jir ah oo aan galmo ka badan 10 sano. Tani marna ahaa qorshaha, laakiin waxaan ahay ku xayiran in goobo aan weligeed ka hadhayn: Waxaan ka welwelin wax badan oo ku saabsan sida aan this sheegi karay in la Wadaage kara oo muddo dheer ah waxa on tagaa, xun u helo. Ma doonayo in ay ku noolaadaan inta kale ee noloshayda aan galmada iyo kalgacal.
In aragti ahaan diyaar u ah inay ku xirmaan galmada qof kale waa tallaabada koobaad oo wanaagsan. Waxaad haysan doontaa in ay qaataan khatarta qaar ka mid ah, in kastoo, oo waxaa jira difaac yar loogu talogalay qof kasta ka dhanka ah gelyo xumada iyo embarrassments, iyadoo aan loo eegayn sida khibrad uleh arimaha galmada waxa laga yaabaa inay. Dhab ahaan, isagoo u furan diidmada - xataa Jees - waa qayb muhiim ah oo aad shaqo ka hor. Marka raaxo dhacdaa, kaliya naftaada u sheeg in aad neefsato iyo waxa u dulqaadan.
Hadda, isku dayaan in ay diiradda saaraan samaynta xidhiidh la leeyahay dadka kale si fudud waayo xiiso leh iyo saaxiibtinimo. Haddii aad u ogolaato naftaada si ay u noqdaan bulshaawiyiin, si degdeg ah ama waqti dambe aad si dabiici ah la kulmi doonaa qof aad la soo jiidatay doonaa. Halkaa marka ay marayso in, aad dhabtii yeelan doonaa inuu ka tago aad zone raaxada iyo ha rabitaan uu kaxayn jidka.
Wacadka in ay carruurta in jirkaaga hadda ka dib, oo ay qaataan fikradda ah in aad u qalmaan in ay ku faraxsan. qabka kasta aadanaha hal noqon kartaa jiidasho in kale. Oo ha ka welwelina views negative-hawlgalayaasha kara 'ku saabsan Celibacy muddo-dheer: uma baahnid inaad u sheegto, laakiin xitaa haddii aad, rag badan oo si fudud u qaadan doonaa in aad leedahay heerar sare.
• Pamela Stephenson Connolly waa cilminafsiga ku salaysan Maraykan ah oo ku takhasustay cudurada galmada.
• Haddii aad jeclaan lahayd talo ka Pamela Stephenson Connolly ku saabsan arrimaha galmada, noo soo diri sharaxaad kooban oo walaac aad u private.lives@theguardian.com (fadlan ha soo diri lifaaqan). Toddobaad kasta, Pamela doorto mid dhibaato in ay ka jawaabaan, taas oo laga soo saari doonaa online iyo in print. Waxay ka xun, in aanay iyadu geli kari waraaqo shakhsi.
← Lahayd aad kaadinayso In sharabaaddo Your Si Eedayn Your Phone? Madaxda Great ha oo dhan ma samayn on iyaga u gaar ah →